Planetarium ဦး စီးဌာန - ဝေဒ Planetarium ၏ဘုရားကျောင်း
သင်၏လှူဒါန်းမှုမှတ်တမ်း၊ အလှူရှင်ပရိုဖိုင်း၊ လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၊ စာရင်းပေးသွင်းခြင်း / ထပ်တလဲလဲငွေပေးချေခြင်းများနှင့်အခြားအရာများကိုကြည့်ရှုစီမံခြင်း
အလှူရှင်ဒိုင်ခွက်သည်အလှူရှင်များကိုသူတို့၏ပေးကမ်းခြင်းသမိုင်း၊ အလှူရှင်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၊ ကြေးပေးသွင်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အခြားအရာများအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသောနေရာဖြစ်သည်။
အလှူရှင်သည်သူတို့၏ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် (အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအတည်ပြုခြင်းဖြင့်) အလှူရှင် Dashboard စာမျက်နှာကသူတို့ကိုလှူဒါန်းသူဒိုင်ခွက်၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုကြည့်ရှုစေနိုင်သည်။
အလှူရှင်တစ် ဦး သည်ဒိုင်ခွက်ဘုတ်ကိုပထမ ဦး ဆုံးဖွင့်လိုက်သောအခါ၎င်းတို့သည်ဆိုက်ရှိ၎င်းတို့၏အလှူရှင်ပရိုဖိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံး၏အဆင့်မြင့်အမြင်ကိုမြင်တွေ့ရသည်။ အကယ်၍ အကောင့်တွင်မူလသတ်မှတ်ထားသည့်အီးမေးလ်လိပ်စာတွင် Gravatar ပုံရိပ်ရှိသည်ဆိုပါက၎င်းသည် Dashboard ၏ဘယ်ဘက်အပေါ်ဘက်တွင်ပြလိမ့်မည်။
အဓိကဒိုင်ခွက်ဘောင်ပေါ်တွင်အလှူရှင်သည်ပထမပေးစာထဲတွင်၎င်းတို့၏ပေးကမ်းမှုသမိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဆင့်မြင့်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလှူဒါန်းမှုအချို့ကိုမြင်သည်။
ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလှူဒါန်းမှုသမိုင်းအတွက်အလှူရှင်များသည်စစ်ဆေးနိုင်သည် လှူဒါန်းခြင်းသမိုင်း သူတို့ရဲ့သမိုင်းမှာထည့်ဝင်လှူဒါန်းမှုအားလုံးကိုဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုပြသနိုင်တဲ့ tab ။
The သင့်ရဲ့ကိုယ့်ရေးကိုယ်တာကိုပြုပြင်ရန် tab ကသင်၏အလှူရှင်များကိုလိပ်စာ၊ အီးမေးလ်စသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့ခွင့်ပြုသည်ဖြစ်စေခွင့်ပြုသည်။ သူတို့ကဆိုက်၏ရှေ့ပိုင်းတွင်အမည်ဝှက်လိုခြင်းရှိမရှိ။
အပေါ် ထပ်တလဲလဲအလှူငွေ tab, စာရင်းသွင်းမှုအားလုံးကိုစာရင်းတစ်ခုစီအတွက်ရွေးချယ်စရာများတွေ့လိမ့်မည်။ အလှူရှင်များသည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို update လုပ်နိုင်သလိုစာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
The နှစ်စဉ်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ tab သည်အလှူရှင်များအားအခွန်နှင့်အခြားမှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နှစ်စဉ်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကိုရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင်၏ TOVP အကောင့်နှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောမေးခွန်းများရှိပါက fundraising@tovp.org သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ
DONOR ACCOUNT tab သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက်မှစ၍ ပေးအပ်သောလှူဒါန်းမှုသမိုင်းကိုသာပေးလိမ့်မည်။
TOVP လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်ကိုလာကြည့်ပါ · စာအုပ်စျေးကွက်ရှာဖွေပါ
ဗိသုကာ Dept. အစီရင်ခံစာများ
Jananivasa Prabhu က ToVP အကြောင်းပြောဆိုသည်
ဝေဒ Cosmology ဗီဒီယိုများ
ဝေဒသိပ္ပံ Channel ကို
အဆိုပါ Bhaktivedanta Institute မှ
အဆင့်မြင့်လေ့လာရေးများအတွက် Bhaktivedanta Institute မှ
Bhaktivedanta Vidyapitha သုတေသနဌာန
TOVP Talks - Parampara ၏အမြင်
Planetarium ဦး စီးဌာန
PRABHUPADA SEVA 125 ဒင်္ဂါးပြားအသစ်
PRABHUPADA MURTI တပ်ဆင်ခြင်းအသစ်
PANKAJANGHRI DAS SEVAအသစ်
ရာဂရားဒင်္ဂါးပြား - အိန္ဒိယပဲ!
CAITANYA အကြွေစေ့ - တစ်ခုတည်းသောအိန္ဒိယ!
ADVAITA အကြွေစေ့ - တစ်ခုတည်းသောအိန္ဒိယ!
ဂဒတ်ဒင်္ဂါးပြား - အိန္ဒိယပဲ!
SRIVAS အကြွေစေ့ - တစ်ခုတည်းသောအိန္ဒိယ!
ATMA NIVEDANAM တိုင်
ရေဒါ -MADHAVA အုတ်
ရာဂျာ - မက်ဟာဗာအုတ် - အိန္ဒိယတစ်ခုတည်းသာ!
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယ၊ အိန္ဒိယ၊
GURUPARAMPARA အုတ် - တစ်ခုတည်းသောအိန္ဒိယ!
NRSIMHADEVA tile ကို
NRSIMHADEVA tile - တစ်ခုတည်းသောအိန္ဒိယ။
TOVP DOME FOR နေ့တိုင်းအလံ
နှစ်ထပ်ခြေလျင် OR မီတာ
တစ်ခုတည်းသောတိုင်းတာခြင်းသို့မဟုတ်မီတာ - တစ်ခုတည်းသောအိန္ဒိယဖြစ်သည်။
အထွေထွေလှူဒါန်းမှု - တစ်ခုတည်းသောအိန္ဒိယ
ပေါင်ငွေပေးချေမှု - အိန္ဒိယတစ်ခုတည်းသော!
လှူဒါန်းမှုအသေးစိတ် / Pledge ငွေပေးချေခြင်း / ဆက်သွယ်ရန်
Radha Madhava အုတ်အလှူရှင်များ
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရင်းတွင်ဤဆိုက်တွင်လှူဒါန်းရန်သို့မဟုတ်အပေါင်ပေးရန်အတွက်ရရှိနိုင်သောငွေပေးချေမှုပုံစံများပါ ၀ င်သည်။ တစ် ဦး ချင်းလှူဒါန်းခြင်းစာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီသည်သင်၏တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ သီးခြားစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်ငွေပေးချေရန်ရွေးချယ်စရာများကိုလမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မည်။ ပေါင်ထားသည့်ငွေပေးချေမှုအတွက်အထွေထွေလှူဒါန်းမှုရွေးစရာကိုအသုံးပြုပါ။ သို့မဟုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ပေါင်ပေးချေမှု Header အောက်ရှိ DONATE NOW စာမျက်နှာ၏ညာဘက်ထောင့်ရှိ tab ..
သူ၏သန့်ရှင်းမှု Jayapataka Swami သည် Srila Prabhupada နှင့် ISKCON Guru နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်၏တပည့်ဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် Sannyasa ၏အမိန့်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးထို အချိန်မှစ၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသီရိ Caitanya Mahaprabhu ၏သွန်သင်မှုများပျံ့နှံ့စေရန်သူ၏ဘဝကိုမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
Harry Sauri DAS
Hari Sauri ကို ၁၉၅၀၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်တွင်အင်္ဂလန်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်မေလတွင်သူသည်သြစတြေးလျသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီးဒုတိယမြောက်နေ့တွင်သူသည်အသစ်ပေါ်ထွက်လာသော Krishna ဟိန္ဒူသိစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူသည် ၁၉၇၂ ခုနှစ်Aprilပြီလ ၉ ရက်တွင်ဆစ်ဒနီမြို့ရှိသူ၏ Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada မှသူ၏တပည့်အဖြစ်လက်ခံခဲ့သည်။
RAMESWAR DAS (ACBSP)
Ramesvara das (Robert Grant) ကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီး AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada (Srila Prabhupada) ၏ ဦး ဆောင်တပည့်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး ISKCON အတွင်းမှဂုရုဖြစ်သည်။
Ramesvara သည် Srila Prabhupada ၏discipပြီလ ၂၈ ရက်၊ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်အီးမေးလ်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ မှ ၁၉၈၆ အထိ Ramesvarawas သည် ISKCON ၏အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကော်မရှင် (GBC) ၏အသင်းဝင်ဖြစ်ပြီး ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Los Angeles ရှိသူတို့၏ဌာနချုပ်မှအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး Bhaktivedanta Book Trust (BBT) အတွက် BBT Trustee ဖြစ်လာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်မြောက်အမေရိက BBT ၏အကြီးအကဲဖြစ်လာသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် GBC သည် ISKCON အတွင်းရှိ GBC စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်အားလုံးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ BBT ကိုတည်ထောင်သူ AC Bhaktivedanta Swami ကတစ်သက်တာခန့်အပ်ခြင်းခံရသောကြောင့်သူသည် BBT မှနှုတ်ထွက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။
Michael Cremo (Drutakarma Das ဟုလည်းခေါ်သည်) သည်သိပ္ပံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုရှေ့တန်းတင်နေသည်။ လအနည်းငယ်အကြာတွင်သူသည်အိန္ဒိယရှိမြင့်မြတ်သောနေရာများသို့ဘုရားဖူးသွားခြင်း၊ အမျိုးသားရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲတွင်ပေါ်ထွန်းခြင်း၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းသိပ္ပံနည်းကျကွန်ဖရင့်၌ဟောပြောခြင်းသို့မဟုတ်အခြားသိပ္ပံနည်းကျစုရုံးခြင်းနှင့်စကားပြောခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူသည်စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနယ်နိမိတ်များကိုဖြတ်ကျော်သွားသောအခါသူသည်ပရိသတ်များအတွက်အဖြစ်မှန်၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူညီမှုအသစ်တစ်ခုကိုညှိနှိုင်းရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကိစ္စတစ်ခုကိုတင်ပြခဲ့သည်။
Drutakarma Das သည်နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာကွဲလွဲချက်များနှင့်အစွန်းရောက်သောလူသားတို့၏ရှေး ဦး သူနာပြုဖြစ်သည်။ Bhaktivedanta Institute ၏အရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာနှင့်သုတေသနလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူသည်သိပ္ပံပညာသမိုင်းနှင့်ဒinနိကဗေဒတွင်အထူးပြုထားသည်။ သူသည်ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းသုတေသနကွန်ဂရက်နှင့်ဥရောပရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များအသင်း၏အသင်းဝင်ဖြစ်သည်။
Ravindra Svarupa Dasa (William H. Deadwyler) သည်သူ၏မြင့်မြတ်သောကျေးဇူးတော် AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Krishna Consciousness for International Society (ISKCON) ၏တည်ထောင်သူတပည့်ဖြစ်သည်။
Ravindra Svarupa Dasa သည် ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် Pennsylvania တက္ကသိုလ်မှ Ph.D ဘွဲ့ကိုဒPhilနိကဗေဒဘာသာရပ်ဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ တွင် Temple University မှဘာသာရေး၌ပါ ၀ င်သည်။ ၁၉၇၁ တွင် Srila Prabhupada ၏စတင်တပည့်ဖြစ်လာသည်။ RKindra Svarupa Dasa သည် ISKCON တွင်ဆယ်စုနှစ်များစွာအမှုဆောင်ခဲ့ပြီး ISKCON ၏ Philadelphia ဗိမာန်တော်၏ဥက္ကand္ဌနှင့် ISKCON ၏ဒေသန္တရဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်သောအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကော်မရှင်၏အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်သူသည်စာရေးဆရာနှင့်ကထိကအဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပြီး Vaishnava လေ့လာရေးဂျာနယ်တွင်ထုတ်ဝေသော“ Radha, Krsna, Caitanya: the Divine Relativity of Inial Dialectic” စသည့် Gaudiya Vaishnava ဒphilosophနနှင့် ISKCON အကြောင်းဆောင်းပါးများစွာထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ။ သူ၏မကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့သော Srila Prabhupada - ISKCON မှတည်ထောင်သူ - Acarya သည် GBC ၏အခြေခံကျသောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပြီး Srila Prabhupada ၏တည်ထောင်သူ - Acarya ၏သမိုင်းနှင့်တင်ပို့မှုအားခြောက်နှစ်တာသုတေသနပြုခြင်းဖြင့်ပြီးဆုံးသည်။ လောလောဆယ် Ravindra Svarupa Dasa သည်နယူးယော့ခ်ရှိ Stuyvesant Falls တွင်နေထိုင်သည်။ သူသည်အချိန်ပြည့်သင်ကြားသည်။
မဟာဗျူဟာမြောက် Synergy / ရန်ပုံငွေရှာ
RAMANAND GOURANGA DAS
TOVP MISSION 23 MARATHON သို့ဝင်ရောက်ပါ
၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် TOVP ကိုဖြည့်စွက်ပြီး Srila Prabhupada ၏အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကူညီပါ။
ဖက်စ်: +91 (3472) 245238
Chakra အဆောက်အ ဦး, အခန်း 204
အကွာအဝေး။ Nadia, အနောက်ဘင်္ဂလားအိန္ဒိယ, 741313
သတင်းလွှာ / စာသားများ SIGNUP
TOVP ဖုန်း APP ကိုဒေါင်းလုပ်ချပါ
SMART ကဒ် TOVP ကိုချပါ
တည်ထောင်သူ Acarya: သူ၏ Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada
© 2009 - 2021 Vedic Planetarium ၏ဘုရားကျောင်း။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။